Nhau - Huawei inoshandura mutsauko
Huawei inoshandura mutsauko
Tsika dzeHuawei switch dzinogadzirwa kubva kumabhiriji uye dzaive dzechipiri chikamu cheOSI, iyo data link dura michina. Iyo inotaura maererano nekero yeMAC, inosarudza nzira kuburikidza netafura yechiteshi, uye kumisikidzwa uye kugadziriswa kwetafura chiteshi kunoitwa otomatiki neCISCO Cisco switch. Iyo router ndeyetatu chikamu cheOSI, ndiko kuti, network nhare. Iyo inotaurisa zvinoenderana neIP kero uye inogadzirwa kuburikidza neiyo yekufambisa tafura yekufambisa protocol. Mukana wakakura weyakagadzika-gumi 10 Gigabit switch inokurumidza. Nekuti switch inongoda chete kuona iyo MAC kero mune iyo furemu, inogadzira uye inosarudza yekuendesa chiteshi algorithm zvichibva pakero yeMAC. Iyo algorithm iri nyore uye yakapusa kuitiswa neASIC, saka iyo yekumhanyisa kumhanyisa yakanyanya kwazvo. Asi mashandiro ekuchinja switch anounzawo mamwe matambudziko.
1. chiuno: Zvinoenderana neHuawei switch kero yekudzidza uye chiteshi tafura yekumisikidza algorithm, zvishwe hazvitenderwe pakati pekuchinja. Kamwe kana paine chiuno, iyo yakatambanudza miti algorithm inofanira kutanga kuvharira chiteshi chinogadzira chiuno. Iyo router's routing protocol haina dambudziko iri. Panogona kuve nenzira dzakawanda pakati pema routers kuyera mutoro uye nekuvandudza kuvimbika.
2. Load wevasungwa: Panogona chete kuve neumwe chiteshi pakati peHuawei switch, zvekuti ruzivo rwakanangana pane imwechete kutaurirana chinongedzo, uye simba rekuparadzira hazvigoneke kuyera mutoro. Iyo router's routing protocol algorithm inogona kudzivirira izvi. Iyo OSPF routing protocol algorithm haigone kungogadzira nzira dzakawanda, asi zvakare sarudza dzakasiyana nzira dzakanakisa dzeakasiyana manyorerwo ekushandisa.
3.Kutepfenyura kutonga: Huawei switch inokwanisa chete kudzikisira dhivhosi, asi kwete dambarefu renhepfenyuro. Iyo yose yakachinjiswa netiweki hombe nhepfenyuro dura, uye nhepfenyuro meseji dzakapararira mukati mese yakachinjiswa network. Iyo router inogona kusarudzira nhepfenyuro, uye nhepfenyuro mapaketi haigone kuenderera ichitepfenyurwa kuburikidza neiyo router.
External Modulation Transmitter, Xfp Transceiver, Optical Fiber Module, Huawei Qsfp +, Sfp C ++, Huawei Olt Mutengo,